I-Lucia Charming Home: indawo yokuhlala esezingeni eliphezulu eLucca - I-Airbnb
I-Lucia Charming Home: indawo yokuhlala esezingeni eliphezulu eLucca
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Lucia
U-Lucia Ungumbungazi ovelele
Indawo yokuhlala entsha, i-mq 68, iphelele futhi inefenisha, ithokomele kakhulu ngazo zonke izinsiza ozidingayo nge-A/C ne-optic fiber WIFI. Isitezi esiphansi sesigodlo sasendulo eLucca, amamitha ambalwa kude nesakhiwo sodumo saseGuinigi Tower, esingenye yezindawo eziheha kakhulu edolobheni. Ilungele abantu abafuna ukujabulela indawo emaphakathi yedolobha, kodwa babe nokuzola nokuthula kwenye yezindawo ezinhle kakhulu zedolobha. Kuhle kakhulu futhi njengeHQ ukuvakashela ezinye izindawo eTuscany zonke eziseduze njengeFlorence, Pisa, Versilia.
Ifulethi lifinyeleleka kalula futhi lizokuvumela ukuthi uvakashele yonke indawo enkabeni yedolobha ngokuhamba ngaphansi kwemizuzu eyi-10. Uzothola ngezansi lonke ulwazi mayelana nezindawo zokupaka ongazithola eduze kwendlu. Ifulethi livuselelwe kabusha ngama-fornitures amasha kanye nemishini emisha yasendlini futhi inakho konke ukunethezeka. Amafasitela ama-Tre wide aqinisekisa ukukhanya okuhle kwamakamelo futhi ebusuku izivalo zokhuni ziqinisekisa umsindo omuhle nokuhlukaniswa okukhanyayo emisindweni yedolobha, noma ngabe iquartier ngokuvamile ithule futhi inokuthula.
Enye yezindawo ezithule kunazo zonke enkabeni yedolobha, isikhundla esihle kakhulu. Eduze neGuinigi Tower edumile, edume ngezihlahla phezulu.
Ngizoba khona esivakashi nganoma yiluphi ulwazi noma isidingo ngaphambi noma ngemva kokungena. Nganoma yisiphi isicelo noma isimo esiphuthumayo ngizotholakala futhi ngizokwazi ukungithola ngocingo noma ngewebhusayithi.
ULucia Ungumbungazi ovelele